गोल्डकपको लहर कति राम्रो कति नराम्रो ? - खेलकुद - साप्ताहिक
गोल्डकपको लहर कति राम्रो कति नराम्रो ?
नेपाली फुटबलमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवादको विषय हो, के गोल्डकपका नाममा हुने फुटबल प्रतियोगिताहरू ठीक छन् ? अहिले यो प्रसङ्ग किन भन्दा एक त अहिले दर्जनजति गोल्डकप सुरु हुने वा सम्पन्न हुने क्रममा छन् । जाडो मौसम मोफसलका लागि फुटबल प्रतियोगिताको मौसम पनि हो । यो ६ महिनाको हाराहारीमा विभिन्न नाममा विभिन्न फुटबल प्रतियोगिताहरू सञ्चालित हुन्छन् । यस क्रममा आयोजक, खेलाडी, प्रशिक्षक, क्लबदेखि रेफ्रीसम्म सबै व्यस्त रहन्छन् ।
आयोजकहरूको दाबी मान्ने हो भने नेपाली घरेलु फुटबल यिनैले धानेका छन् । यस्तो दाबीका पछाडि ठोस कारण पनि छ । लिग फुटबल हुन नसकेको लामै समय भैसकेको छ । काठमाडौंका क्लबले खेलाडीलाई लामो व्यवसायिक अनुबन्ध नगरेको पनि धेरै भैसकेको छ । काठमाडौंमा लिग मात्र होइन, नकआउट प्रतियोगिता नै हुन नसकेको स्थितिमा घरेलु फुटबललाई जीवन्त राख्ने श्रेय यी प्रतियोगिताहरूलाई जानैपर्छ ।
यिनै गोल्डकपले गर्दा खेलाडीहरूले निरन्तर फुटबल खेल्नपाइरहेका छन् । पूर्वतिरको फुटबल हाँक्नमा दिलीप राई, सन्तोष बानियाँ तथा भगीरथ आलेहरू सक्रिय छन् । उनीहरूले लामै समयदेखि भनिआएका छन्– स्थानीय स्तरका यस्ता प्रतियोगिताले नेपाली फुटबलको लगातार सेवा गरिरहेको छ तर यिनै प्रतियोगितालाई पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सहयोग गर्न कन्जुस्याइँ गर्छ । उनीहरूको मात्र होइन, पश्चिततिर फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नेहरूको आवाज पनि त्यस्तै छ । पश्चिमतिर पनि फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने होड सुरु भैसकेको छ ।
मोफसलमा हुने फुटबल प्रतियोगितामध्ये अहिले चलिरहेको आहा रारा गोल्डकप सबैभन्दा व्यवस्थित मानिन्छ, तर यसको आयोजक सहारा क्लबसँग पनि केन्द्रको व्यवहारलाई लिएर धेरै गुनासो छ । नेपाली फुटबल पारखीहरूसँग पनि यी प्रतियोगितालाई लिएर गुनासो नभएको होइन । जस्तो, यस्ता प्रतियोगिताको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको प्राविधिक पक्ष हो । यस्ता प्रतिगोगिता चल्ने समयको टुंगो हुँदैन, अतिरिक्त समय थप्ने अथवा सिधै टाइब्रेकरमा जाने नियममा समेत एकरूपता छैन ।
धेरै समस्या छन्, यस्ता प्रतियोगितामा । सबैभन्दा हाँसोको विषय त्यति बेला हुन्छ, जति बेला एक दिन एउटा खेलाडीले एउटा टिमबाट खेल्छ । अर्को दिन अर्कै टिमबाट । प्रतियोगिताका क्रममा ठूलो विवाद हुँदा कसलाई कस्तो अनुशासनको कारबाही गर्ने भन्ने पनि निश्चित छैन । मैदानमा खेलाडी घाइते हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यी सबै समस्याका लागि सबैभन्दा बढी दोष स्वभाविक रूपमा एन्फातिर मोडिन्छ, किनभने फुटबलको सर्वोच्च निकाय त यही नै हो ।
अहिले गोल्डकपका नाममा हुने यी प्रतियोगिताको वर्गीकरण गरिने चर्चा पनि छ । प्रतियोगितालाई स्तरीय बनाउन एन्फाका तर्फबाट समय–समयमा प्रयास नभएको पनि होइन् । आउने एक वर्षमा सम्भवत: नेपाली घरेलु फुटबलमा रहेका धेरै समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुन सक्छ । यसका पछाडि दुई कारण छन्, पहिलो फुटबल संघलाई एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट अनिवार्य हुन लागेको ‘रणनीतिक योजना’ । अर्को प्रत्येक क्लबलाई ‘क्लब लाइसेनिङ’ मा जाने अनिवार्यता ।
अबदेखि एन्फाले एएफसीसामु आफ्नो चार वर्षे रणनीतिक योजना पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसमा कुन प्रतियोगिता कसरी गर्ने, कति बेला गर्ने, कति गर्नेदेखि लिएर सबै योजना समावेश हुनुपर्नेछ । यस्तो योजना पेस गरिएन भने एएफसी र फिफाबाट आउने कुनै पनि प्रकारको सहयोग प्राप्त हुने छैन । क्लब लाइसेनिङ लागू भयो भने क्लबले पनि खास–खास नियम मान्नैपर्ने हुन्छ । यो नियम लागू भयो भने खेलाडीले आफू अनुबन्धित टिमलाई छाडेर अरू क्लबबाट खेल्न पाउने छैनन् ।
क्लबहरू लाइसेनिङमा गएनन् भने उनीहरूले एएफसीको मान्यता पाउने छैनन् भने उनीहरूले एन्फाको मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता पनि खेल्न पाउँदैनन् । यस्तो स्थितिमा गोल्डकप आयोजना गर्ने संस्थालाई पनि आफ्नो प्रतियोगितालाई अझ परिस्कृत बनाउने दबाब हुनेछ । प्रतियोगिता कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, प्रतियोगिता सफल र सबल बनाउन के गर्नु पर्छ भनेर प्रशिक्षण दिन पनि तयार छ, एएफसी । यो किन पनि जरुरी छ भने नेपाली घरेलु फुटबल धानेकै यस्ता प्रतियोगिताहरूले हो । त्यसैले यसमा सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
पाल्पामा खेलकुद पूर्वाधार छैन जेष्ठ ८, २०७५
सबैभन्दा खुल्ला समूह जेष्ठ ७, २०७५
दमक गोल्डकपको उपाधि पुलिसलाई जेष्ठ ६, २०७५
अझ बृहत् हाफ म्याराथन वैशाख ३१, २०७५
एन्फामा ऐतिहासिक परिवर्तन वैशाख २९, २०७५
पिपुल्स च्वाइसका प्रत्याशी वैशाख २५, २०७५
तेक्वान्दो कीर्तिमान वैशाख २४, २०७५
प्रमुख लिगमा एकहोरो जित वैशाख २३, २०७५
नेपालले धेरै सिक्न बाँकी वैशाख १५, २०७५